အလုပ်ဖြုတ်ခံရတဲ့သူတွေကို Burger King က ဘာဂါအခမဲ့ကျွေးမယ့် အစီအစဉ်
30 Aug 2017 . 2:36 PM
အဂါင်္နေ့မှာ Burger King က သူတို့ရဲ့ အစီအစဉ်အသစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ “Whopper Severance” ကို ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်မှာ တစ်ယောက်ယောက်က အလုပ်ဖြုတ်ခံရပါတယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကြေညာမှုလုပ်တာနဲ့ Burger King ရဲ့ လက်ဆောင်ကဒ်ကို အခမဲ့ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခင်ဗျားအနေနဲ့ လုပ်ဆောင်ရမှာကတော့ LinkedIn ကို ဝင်ပြီး အလုပ်ထုတ်ခံရတဲ့ အကြောင်းနဲ့ Burger King ရဲ့ Whopper burger အခမဲ့ ရယူချင်တဲ့အကြောင်းကို “I got fired. I wantafree Whopper. #WhopperSeverance” ဆိုတဲ့ စာသားနဲ့ တင်ပေးရမှာပါ။
အဲဒီအခါကျရင် Burger King က “Whopper Severance Package” ရယူဖို့အတွက် လင့်တစ်ခုပို့ပေးမှာ ဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီလင့်မှာ Burger King Gift Card ရယူခွင့်ပါရှိပါတယ်။ အခုအစီအစဉ်အရ ဘာဂါ ၂၅၀၀ လောက် ပေးဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ ကြည့်ရတာတော့ Burger King ဟာ LinkedIn ကနေ ဒီလိုတင်တဲ့သူတွေကို တကယ်အလုပ်ထုတ်ခံရတာ ဟုတ်မဟုတ် စိစစ်မယ့်ပုံမပေါ်ပါဘူး။ အဲ့ဒါအပြင် တချို့လူတွေဟာ လုပ်ငန်းခွင်မှာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမတော်တရားပြုလို့၊ အကြမ်းဖက်လို့ ၊ ဥပဒေချိုးဖောက်လို့စတဲ့ မသမာမှုတွေကြောင့် အလုပ်ထုတ်ခံရတာမျိုးလည်းရှိပြီး ဒါတွေကိုလည်း စိစစ်ဖို့ ခက်ခဲနေပါတယ်။
Burger King ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့ အလုပ်ထွက်လိုက်ရတဲ့သူတွေကို စာနာနားလည်ကြောင်းသဘာဝကို ပြသချင်တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ တကယ်လို့ ခင်ဗျားရဲ့ အလုပ်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို သိစေချင်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်တိုင်အလုပ်ထွက်လိုက်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလို Whopper Severance Package ကို အဂါင်္နေ့ကစပြီး သောကြာနေ့ နောက်ဆုံး ရယူခွင့်ရှိပါတယ်။
Burger King ရဲ့ အစီအစဉ်မှာ ဘယ်နိုင်ငံပါတယ် မပါဘူးဆိုတာ အသေးစိတ်မသိရသေးတဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံက လူတွေအတွက်ရောဆိုရင်တော့ စမ်းကြည့်မှ ရမယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ 😛
အဂါင်္နမှေ့ာ Burger King က သူတို့ရဲ့ အစီအစဉျအသဈတဈခုဖွဈတဲ့ “Whopper Severance” ကို ကွညောလိုကျပါတယျ။ ဒီအစီအစဉျမှာ တဈယောကျယောကျက အလုပျဖွုတျခံရပါတယျလို့ ကိုယျ့ကိုယျကို ကွညောမှုလုပျတာနဲ့ Burger King ရဲ့ လကျဆောငျကဒျကို အခမဲ့ရရှိမှာ ဖွဈပါတယျ။
ခငျဗြားအနနေဲ့ လုပျဆောငျရမှာကတော့ LinkedIn ကို ဝငျပွီး အလုပျထုတျခံရတဲ့ အကွောငျးနဲ့ Burger King ရဲ့ Whopper burger အခမဲ့ ရယူခငျြတဲ့အကွောငျးကို “I got fired. I wantafree Whopper. #WhopperSeverance” ဆိုတဲ့ စာသားနဲ့ တငျပေးရမှာပါ။
အဲဒီအခါကရြငျ Burger King က “Whopper Severance Package” ရယူဖို့အတှကျ လငျ့တဈခုပို့ပေးမှာ ဖွဈပွီး အဲ့ဒီလငျ့မှာ Burger King Gift Card ရယူခှငျ့ပါရှိပါတယျ။ အခုအစီအစဉျအရ ဘာဂါ ၂၅၀၀ လောကျ ပေးဖို့ စီစဉျထားပါတယျ။ ကွညျ့ရတာတော့ Burger King ဟာ LinkedIn ကနေ ဒီလိုတငျတဲ့သူတှကေို တကယျအလုပျထုတျခံရတာ ဟုတျမဟုတျ စိစဈမယျ့ပုံမပျေါပါဘူး။ အဲ့ဒါအပွငျ တခြို့လူတှဟော လုပျငနျးခှငျမှာ လိငျပိုငျးဆိုငျရာမတျောတရားပွုလို့၊ အကွမျးဖကျလို့ ၊ ဥပဒခြေိုးဖောကျလို့စတဲ့ မသမာမှုတှကွေောငျ့ အလုပျထုတျခံရတာမြိုးလညျးရှိပွီး ဒါတှကေိုလညျး စိစဈဖို့ ခကျခဲနပေါတယျ။
Burger King ရဲ့ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူကတော့ အလုပျထှကျလိုကျရတဲ့သူတှကေို စာနာနားလညျကွောငျးသဘာဝကို ပွသခငျြတာဖွဈပါတယျတဲ့။ တကယျလို့ ခငျဗြားရဲ့ အလုပျဆုံးရှုံးသှားတဲ့ သူငယျခငျြးတှကေို သိစခေငျြတာပဲ ဖွဈဖွဈ၊ ကိုယျတိုငျအလုပျထှကျလိုကျရတာပဲဖွဈဖွဈ ဒီလို Whopper Severance Package ကို အဂါင်္နကေ့စပွီး သောကွာနေ့ နောကျဆုံး ရယူခှငျ့ရှိပါတယျ။
Burger King ရဲ့ အစီအစဉျမှာ ဘယျနိုငျငံပါတယျ မပါဘူးဆိုတာ အသေးစိတျမသိရသေးတဲ့အတှကျ မွနျမာနိုငျငံက လူတှအေတှကျရောဆိုရငျတော့ စမျးကွညျ့မှ ရမယျလို့ ပွောခငျြပါတယျခငျဗြာ။ 😛